Wararka - Sidee loo doortaa dharka dharka bannaanka?
Waxaa jira noocyo badan oo dhar ah oo loogu talagalay dharka dibedda. Keebaa kugu habboon adiga?
Xulashada dharka banaanka, waxaa jira lix shaqooyin muhiim ah. Aynu eegno lixda astaamood:
Heerka marinka hawada wuxuu kuxiranyahay dhibaatada wareegga hawada marada. Hawada hawada waa tixgelin muhiim u ah dhaqdhaqaaq kasta oo bannaanka ka socda. Dhexdooda, tan ugu muhiimsan waa daboolka iyo kursiga. Xirmooyinka xiran iyo daboolka, maryaha hawo-qaadka ahi waxay sababi karaan caaryaan. Kursiga, barkinta neefsashada waxay noqon doontaa mid aad u raaxo badan, oo aan gacanta ku dheganeyn, aad ugu raaxeysan doonta xagaaga kulul.
Is-caabbinta biyuhu waxay inta badan ku xiran tahay haddii biyuhu isu rogi doonaan dhibco biyo ah dharka. Laakiin waxaa jira qodob, iska caabbinta biyaha iyo soo-gudbinta hawadu waa midba midka kale. Guud ahaan marka laga hadlayo, dharka leh hawo-mareenka hawo xumida leh ayaa u adkaysta biyaha, sida kuwa aan la mari karin, sida dharka vinyl-ka ee dahaarka leh ama dahaarka leh. Biyuhu waa mid aad muhiim ugu ah shiraac, dharka biyuhu iyo yacht qurxinta gudaha.
Xiro iska caabin ah waxaa loola jeedaa kartida dharka si uu ugu adkeysto xirashada xiisada. Dharka loo isticmaalo markabka iyo adeegsiga banaanka ayaa badanaa ah kuwo culus, adag oo badanaa lagu dahaadho vinyl ama miraha kale. Tani waxay badanaa tahay in lagu gaaro muuqaal jilicsan iyo dareemid, iyo in la wanaajiyo iska caabbinta dharka.
U adkaysiga UV
U adkaysiga UV malaha waa qodobka ugu muhiimsan uguna fudud ee dharka banaanka. Markay sare u kacdo iska caabinta UV, ayaa sii dheeraanaya nolosha adeegga marada qorraxda. Maro badan oo loogu talagalay iftiinka qorraxda ayaa ka muhiimsan kuwa kuwa hoos loo dhigo.
Markay sare udhacdo midabka dharka, ayay u badan tahay inuu qaabku yaraado. Midabka soonka midabku wuxuu ku xiran yahay awooda uu u leeyahay inuu ilaaliyo midabka waqti dheer iftiinka qoraxda, roobka iyo barafka. Midabku ku xirnaanshaha ayaa ah cunsur qurxoon. Si kastaba ha noqotee, haddii midabyo dhalaalaya loo isticmaalo daaqadaha, daboolida, gogosha, iwm. Haddii dharka loo isticmaalayo tiro badan ama banaanka loo soo dhigayo muddo dheer, dharka leh qaabka daabacan ayaa laga yaabaa inuu muddo ka dib.
Marka la barbardhigo dharka gudaha, nadaafadda dharka dibadda ayaa umuuqda mid aan muhiim ahayn. Laakiin dharka dibedda, nadaafaddu waxay saameyn ku yeelan doontaa nolosheeda adeegga. Nadaafad, runti, waa in meesha laga saaro wasakhda ku jirta dharka.
Haddii aan la nadiifinin, caaryadu waxay ku sii jiri doontaa dharka waxayna sii wadi doontaa inay ku korto wasakhda. Sida dharka maro hal-dhinac ah ma aha mid aad u nadiif ah, sidaa darteed dharka noocan oo kale ah waa inuu fiiro gaar ah u yeeshaa qaar.